Dmitry Medvedev oo sheegay in uusan Putin doorasho kula tartamayn – SBC
Dmitry Medvedev oo sheegay in uusan Putin doorasho kula tartamayn
Moscow:- Madaxweynaha ruushka ninka lagu magacaabo Dmitry Medvedev ayaa sheegay in ay adag tahay in isaga iyo ra’iisal wasaare Vladimir Putin　in ay ku tartamaan doorashada ka dhacaysa dalka Ruushka sanadka soo socdo.
Madaxweyne Medvedev ayaa ka gaabsaday in uu wax ka yiraahdo wareysi uu siiyey wargeyska financial Times ee ka soo baxa magaalada London oo ku aadanaa in uu doonayo in mar labaad uu galo doorasho si uu ugu guuleysto madaxtinimada Russia.
Medevedev ayaa ku nuuxnuuxsaday in warbixinada sheegaya in ay jiraan tartan u dhexeeya isaga iyo Butin ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn.
Mar sii horeysay wareysi uu siiyey Medvedev wargeyska financial Times ee ka soo baxa magaalada London ayuu ku sheegay in uu u jecel yahay in uu ku guuleysto xilka mar labaad.
Medvedev ayaa u muuqda in uu ka fogaanayo in uu garab taagnaado Vladimir Butin hadii uu soo gudbiyo qoraal ku aadan in uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Russia mar labaad.
Medvedev ayaa carabaabay in isaga iyo Butin ay yihiin saaxiibo qadiimi ah islamarkaana ay isku mid ka yihiin argtida siyaasadda iyo ujeedooyinka ay tiigsanayaan.
Medvedev ayaa markale ku celiyey in uu donayo in Russia ay la jaan qaado siyaasadda casriga ah si dhaqaalaha Russia uu u noqdo mid ka horumarsan xilliyadii hore.
Dadka u kuurgala siyaasadda Russia ayaa ku tilmaamaya in ra’iisal wasaaraha dalka Russia Vladimir Butin uu yahay ninka haya siyaasadda xilligan ay ku socoto Russia , islamarkaana uu yahay ninka ugu dhow ee ku guuleysan kara madaxtinmada Russia mar labaad noloshiisa.